အဓိကပြိုင်ဘက် စီရော်နယ်လ်ဒိုကို တစ်ကြိမ်အသာနဲ့ မက်ဆီ ကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပြီ
ဥရောပသွင်းဂိုးအများဆုံးရွှေဖိနပ်ဆု(ESM)ကို (၅)ကြိမ်မြောက် ဆွတ်ခူးခဲ့တဲ့ မက်ဆီ Messi
21 May 2018 . 11:08 AM
ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ အာဂျင်တီးနား နာမည်ကျော် တိုက်စစ်မှူး မက်ဆီ Messi ဟာ ၂၀၁၇-၁၈ ရာသီ ဥရောပသွင်းဂိုးအများဆုံး ရွှေဖိနပ်ဆု(ESM)ကို တခြားနာမည်ကျော်ကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ ဆာလာ Salah၊ စီရော်နယ်လ်ဒို C.Ronaldo၊ ဟာရီကိန်း Harry Kane တို့ကို ကျော်ဖြတ် ဆွတ်ခူးခဲ့ပြီး ဒီဆုဟာ မက်ဆီ အတွက် (၅)ကြိမ်မြောက်လည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီရာသီ လာလီဂါမှာ ဘာစီလိုနာအသင်းအတွက် (၃၄)ဂိုးအထိ သွင်းယူခဲ့ပြီး လာလီဂါချန်ပီယံဆုရရှိအောင် စွမ်းဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ မက်ဆီဟာ စုစုပေါင်းရမှတ် (၆၈)မှတ်နဲ့ ESM ရွှေဖိနပ်ဆုကို ဆွတ်ခူးခဲ့တာဖြစ်သလို လာလီဂါသွင်းဂိုးအများဆုံး ရွှေဖိနပ်(ပီချီချီ)ဆုကိုလည်း ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့တယ်။ မက်ဆီအနေနဲ့ ပီချီချီဆုကို (၄)ကြိမ်မြောက်ရခဲ့တာဖြစ်ပြီး အကြိမ်အများဆုံး ဆွတ်ခူးခဲ့တဲ့ ဘီလ်ဘာအို ဂန္ထ၀င်တိုက်စစ်မှူး တယ်လ်မိုဇာရာ Telmo Zarra ရဲ့ စံချိန်ကို မီဖို့ တစ်ကြိမ်သာ လိုပါတော့တယ်။
ESM ဆုကို လီဗာပူးလ်အသင်းရဲ့ အီဂျစ်နာမည်ကျော်ကစားသမား ဆာလာက ဆွတ်ခူးဖို့ အခြေအနေကောင်းခဲ့ပေမယ့် မတ်လကုန်အထိ ဆာလာဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်(၄)ဂိုးသာ သွင်းနိုင်ခဲ့ပြီး မက်ဆီက (၈)ဂိုးအထိ သွင်းယူခဲ့တာကြောင့် ဆာလာကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မက်ဆီအနေနဲ့ ဒီဆုကို (၅)ကြိမ်မြောက် ဆွတ်ခူးခဲ့နိုင်ခဲ့လို့ အကြိမ်အများဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ကစားသမားစာရင်းမှာ သူ့ရဲ့အဓိကပြိုင်ဘက် စီရော်နယ်လ်ဒိုကို ကျော်ဖြတ်ပြီး ထိပ်ဆုံးနေရာကို တစ်ဦးတည်း ပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။ ESM ဆုကို (၄)ကြိမ်အထိ ရရှိခဲ့ဖူးတဲ့ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ ဒီရာသီ လာလီဂါမှာ (၂၆)ဂိုးသာ သွင်းယူနိုင်ခဲ့တာကြောင့် (၅၂)မှတ်နဲ့ အဆင့်(၈)နေရာသာ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၈-၀၉ ရာသီက စပြီး ESM ဆုကို လာလီဂါက ကစားသမားအများစု ဆွတ်ခူးခဲ့သလို နောက်ဆုံး(၁၃)ကြိမ်မှာ (၁၂)ဦးအထိ ရရှိခဲ့တယ်။ အဲဒီ(၁၂)ဦးထဲမှာ ဘာစီလိုနာနဲ့ ရီးယဲလ်ကစားသမားတွေသာ အများဆုံးပါဝင်ခဲ့ပြီး အဲဒီနှစ်သင်းပြင်ပက ဆွတ်ခူးခဲ့တာဆိုလို့ ၂၀၀၈-၀၉ ရာသီက အက်သလက်တီကို တိုက်စစ်မှူး ဒီယေဂိုဖော်လန် Diego Forlan တစ်ဦးသာပါဝင်ခဲ့တာပါ။
၂၀၁၇-၁၈ ရာသီ ESM ဆုအတွက် ကစားသမားစာရင်း
4. Mauro Icardi, Inter Milan, 58 (29)
7. Edinson Cavani, Paris Saint-Germain, 56 (28)
8. Cristiano Ronaldo, Real Madrid, 52 (26)
9. Jonas, Benfica, 51 (34)
10. Luis Suarez, Barcelona, 50 (25)
(ဥရောပထိပ်သီးလိဂ်(၅)ခုအတွက် သွင်းဂိုးများကို ၂ မှတ်၊ ကျန်လိဂ်များမှ သွင်းဂိုးများကို ၁.၅ မှတ် နှင့် ၁ မှတ်စီသတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်)
ESM ဆုကို အကြိမ်အများဆုံးရရှိခဲ့သူများ
Lionel Messi52009–10, 2011–12, 2012–13, 2016–17, 2017–18
Gerd Müller21969–70, 1971–72
Dudu Georgescu21974–75, 1976–77
Photo:The National,Getty Images
ဥရောပသှငျးဂိုးအမြားဆုံးရှဖေိနပျဆု(ESM)ကို (၅)ကွိမျမွောကျ ဆှတျခူးခဲ့တဲ့ မကျဆီ Messi
ဘာစီလိုနာအသငျးရဲ့ အာဂငျြတီးနား နာမညျကြျော တိုကျစဈမှူး မကျဆီ Messi ဟာ ၂၀၁၇-၁၈ ရာသီ ဥရောပသှငျးဂိုးအမြားဆုံး ရှဖေိနပျဆု(ESM)ကို တခွားနာမညျကြျောကစားသမားတှဖွေဈတဲ့ ဆာလာ Salah၊ စီရျောနယျလျဒို C.Ronaldo၊ ဟာရီကိနျး Harry Kane တို့ကို ကြျောဖွတျ ဆှတျခူးခဲ့ပွီး ဒီဆုဟာ မကျဆီ အတှကျ (၅)ကွိမျမွောကျလညျးဖွဈခဲ့ပါတယျ။ ဒီရာသီ လာလီဂါမှာ ဘာစီလိုနာအသငျးအတှကျ (၃၄)ဂိုးအထိ သှငျးယူခဲ့ပွီး လာလီဂါခနျြပီယံဆုရရှိအောငျ စှမျးဆောငျပေးခဲ့တဲ့ မကျဆီဟာ စုစုပေါငျးရမှတျ (၆၈)မှတျနဲ့ ESM ရှဖေိနပျဆုကို ဆှတျခူးခဲ့တာဖွဈသလို လာလီဂါသှငျးဂိုးအမြားဆုံး ရှဖေိနပျ(ပီခြီခြီ)ဆုကိုလညျး ဆှတျခူးနိုငျခဲ့တယျ။ မကျဆီအနနေဲ့ ပီခြီခြီဆုကို (၄)ကွိမျမွောကျရခဲ့တာဖွဈပွီး အကွိမျအမြားဆုံး ဆှတျခူးခဲ့တဲ့ ဘီလျဘာအို ဂန်ထဝငျတိုကျစဈမှူး တယျလျမိုဇာရာ Telmo Zarra ရဲ့ စံခြိနျကို မီဖို့ တဈကွိမျသာ လိုပါတော့တယျ။
ESM ဆုကို လီဗာပူးလျအသငျးရဲ့ အီဂဈြနာမညျကြျောကစားသမား ဆာလာက ဆှတျခူးဖို့ အခွအေနကေောငျးခဲ့ပမေယျ့ မတျလကုနျအထိ ဆာလာဟာ ပရီးမီးယားလိဂျ(၄)ဂိုးသာ သှငျးနိုငျခဲ့ပွီး မကျဆီက (၈)ဂိုးအထိ သှငျးယူခဲ့တာကွောငျ့ ဆာလာကို ကြျောဖွတျနိုငျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ မကျဆီအနနေဲ့ ဒီဆုကို (၅)ကွိမျမွောကျ ဆှတျခူးခဲ့နိုငျခဲ့လို့ အကွိမျအမြားဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ကစားသမားစာရငျးမှာ သူ့ရဲ့အဓိကပွိုငျဘကျ စီရျောနယျလျဒိုကို ကြျောဖွတျပွီး ထိပျဆုံးနရောကို တဈဦးတညျး ပိုငျဆိုငျနိုငျခဲ့ပါပွီ။ ESM ဆုကို (၄)ကွိမျအထိ ရရှိခဲ့ဖူးတဲ့ စီရျောနယျလျဒိုဟာ ဒီရာသီ လာလီဂါမှာ (၂၆)ဂိုးသာ သှငျးယူနိုငျခဲ့တာကွောငျ့ (၅၂)မှတျနဲ့ အဆငျ့(၈)နရောသာ ရရှိခဲ့ပါတယျ။ ၂၀၀၈-၀၉ ရာသီက စပွီး ESM ဆုကို လာလီဂါက ကစားသမားအမြားစု ဆှတျခူးခဲ့သလို နောကျဆုံး(၁၃)ကွိမျမှာ (၁၂)ဦးအထိ ရရှိခဲ့တယျ။ အဲဒီ(၁၂)ဦးထဲမှာ ဘာစီလိုနာနဲ့ ရီးယဲလျကစားသမားတှသော အမြားဆုံးပါဝငျခဲ့ပွီး အဲဒီနှဈသငျးပွငျပက ဆှတျခူးခဲ့တာဆိုလို့ ၂၀၀၈-၀၉ ရာသီက အကျသလကျတီကို တိုကျစဈမှူး ဒီယဂေိုဖျောလနျ Diego Forlan တဈဦးသာပါဝငျခဲ့တာပါ။
၂၀၁၇-၁၈ ရာသီ ESM ဆုအတှကျ ကစားသမားစာရငျး
(ဥရောပထိပျသီးလိဂျ(၅)ခုအတှကျ သှငျးဂိုးမြားကို ၂ မှတျ၊ ကနျြလိဂျမြားမှ သှငျးဂိုးမြားကို ၁.၅ မှတျ နှငျ့ ၁ မှတျစီသတျမှတျထားခွငျးဖွဈသညျ)
ESM ဆုကို အကွိမျအမြားဆုံးရရှိခဲ့သူမြား